Soo-saareyaasha Isweydaarsiga Hoos-u-dhigga Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Hoos-u-jiidey Kumbuyuutarka
Kordhin buuxda oo ka hooseeya orodyahanka si uu u jiido khaanadda dambiisha siligga
Hordhac:Dheereyste buuxa oo ka hooseeya orodyahan si uu u jiido khaanadda dambiisha siligga badanaa wuxuu u isticmaalaa siibidda khaanadaha dambiisha silig. Nooca nooca dhalada ah ee loo yaqaan 'slide slide' wuxuu isticmaalaa boolal lagu hagaajiyo khaanadaha dambiisha siligga siligga ah. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33U
Kordhinta Triple kordhinta hoose ee dhalada silig dambiisha dambiisha silig
Hordhac:Kordhinta Triple kordhinta hoose ee dhalada jikada siligga dambiisha dhoobada silsiladda badanaa loo isticmaalo qaanadaha dambiisha dambiisha siligga. Noocaan ah dhalada khaanadaha hoose waxay isticmaalaan boolal lagu hagaajiyo khaanadda dambiisha dambiisha siligga. Lahaanshaha mashiinka TAIWAI ee saxda ah, oo leh fikrad qaabeyn heer sare ah kooxdeena farsamada ee aadka uquruxsan waxay si taxaddar leh u soosaaraan qalab heer sare ah oo heer sare ah oo qalabka GERISS ah kaas oo ah xulashada ugu fiican ee shirkadaha guryaha adduunka.
Qaab No.: EUR33U2